झूटा अगमवक्ताहरू गर्न चेतावनी | Apg29
legalistic मान्छे देखि भाइ बहिनी होसियार हुनुहोस्, त
सावधान, सुन्दर भाइ बहिनी हुन। झूटा अगमवक्ताहरू र प्रचार फेसबुकमा जताततै छन्, र केही पेरिशेस मा। तिनीहरू हराएका र तिनीहरूले सही भन्ने विश्वास गर्छन्। व्यवस्था राखेर येशूको क्रूसको इनकार यसलाई सजग नभइकन।
तपाईं चेतावनी तपाईं एक अगमवक्ता, प्रचारक वा पास्टर हुनुहुन्छ भनेर बताउँदै। तपाईं व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्यक्ष मानिसहरूलाई बहकाउन। तपाईं आफ्नो गलत भविष्यवाणीहरू प्रवचन तिनीहरूलाई तर्साउन। तपाईं भ्रामक तिनीहरूलाई भन्दा शक्ति चाहनुहुन्छ र व्यवस्था लागू सुझाव।
यो एउटा चेतावनी हो। मलाई आशा छ तपाईं आफ्नो heresies फर्काउने र येशू स्वीकार - अन्यथा म जो प्रकट हुनेछ!
म तपाईंलाई थाहा तपाईं के बिग्रेको फल फलाउन थाहा छ। तपाईं पाँच छ झूटो अगमवक्ताहरू, प्रचारक र pastors छन्।
भाइ बहिनी होसियार हुनुहोस्
त्यसैले legalistic मान्छे को सहोदर सावधान रहन, तिनीहरूले नक्कली र झूटो अगमवाणी छन्।
सबै भविष्यवाणीहरू र एक पुरानो करारका व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनेर प्रचार heresy र गलत छ।
यो दसौं अंश झूट गर्न आउँछ।
र विश्राम दिन आदि गलत र झूट राख्न र पोर्क खान छैन, छन्। यो heresy छ र बाइबलीय छ।
र गरिबी र रोग एक श्राप छ कि एक चर्च मा प्रचार जसले तपाईंलाई - यो झूट र heresy छ। यसलाई बाइबलमा कहाँ भन्नुहुन्छ?
र तपाईंले एक कार, दशौं सर्तहरू, जहाँ नयाँ नियममा यो गर्छ सवारी चलाउँदा, केही दिन पहिले भविष्यवाणी?
र तपाईं योगदान र त्यहाँ राख्न 164 कानून हो कि अमेरिका, तपाईँको भनाइको अर्थ चाहनुहुन्छ? कि व्यवस्था मा हो 613 बाहेक? वा तपाईंले 164 613 को बाहिर चयन र तिनीहरूलाई पकड गर्नुपर्छ? यो गलत र झूट छ।
तपाईंको नाम प्रकट हुनेछ
2020 मा, आफ्नो नाम तपाईं आफ्नो heresy जारी भने, यो भन्दा बढी सबै हुनेछ।
र सोच्न मलाई के चाहनुहुन्छ - म तिमीलाई माया गर्छु, तर जब तपाईं राम्रो महसुस गर्ने छैन र बिरामी छ, र थप झूटा र भ्रामक मान्छे प्रचार जस्तै छैन।
त्यसैले सावधान, सुन्दर भाइ बहिनी हुन। झूटा अगमवक्ताहरू र प्रचार फेसबुकमा जताततै छन्, र केही पेरिशेस मा। तिनीहरू हराएका र तिनीहरूले सही भन्ने विश्वास गर्छन्। व्यवस्था राखेर येशूको क्रूसको इनकार यसलाई सजग नभइकन।
यहाँ पोर्क र यस्तो खाने छैन, जो tithing लागू विश्वास गलत प्रचार, आदि, वा विश्राम दिन द्वारा धोका गरिएको छ गर्नेहरूलाई व्यवस्था केही पदहरू छन्।
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष। प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाईं येशू ख्रीष्टको नासा नाम को सत्य बुझ्न, आमिन त पवित्र आत्मा पुस्तिका Dej गरौं।
तर कृपा मा धनी छ जो परमेश्वर, हामी हाम्रो कसूर मार्फत मृत थिए हुँदा पनि धेरै प्रेम हामीलाई प्रेम, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित सँगै बनाएको छ। अनुग्रह द्वारा सुरक्षित गरिएको छ। हो, उहाँले सँगै अप हामीलाई उठाएको र हामीलाई समयमा ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई दया मा उहाँको अनुग्रहको यसको भारी धन देखाउन कि, ख्रीष्ट येशूको स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगै बस्न बनाएको छ। अनुग्रह द्वारा तिमीहरूले विश्वास मार्फत सुरक्षित छन् लागि; र आफूलाई को छैन भनेर, यो परमेश्वरको वरदान कुनै पनि मानिस घमण्ड गर्नुपर्छ नत्र, किनभने काम, छ। हामी परमेश्वरले हामी तिनीहरूलाई हिंड्न पर्छ भनेर पहिल्यै तयार जो राम्रो काम को लागि ख्रीष्ट येशूको सिर्जना उहाँको कारीगरी, हो को लागि।
शरीरका त शान्ति सिर्जना गर्ने, दुश्मनी, आज्ञा र आफूलाई दुई एक नयाँ मानिस को नियमहरू को व्यवस्था हटाइएको उहाँले थियो जब यो भयो। "
एफेसी 2: 4-10, 15 SFB98
"उहाँको र उहाँलाई विश्वास मार्फत हामी साहसी र निर्धक्क भई परमेश्वरको सामु खडा गर्न सक्छन्।" एफिसी 3:12 SFB98
विश्वास गर्नु अघि हामीले हिरासत मा राखिएको थियो र विश्वास प्रकट हुनेछ सम्म कानून द्वारा गार्ड सहित थियो आए। व्यवस्था हामी विश्वास द्वारा धार्मिक घोषणा हुन सक्छ कि, ख्रीष्टले निम्ति हामीलाई ल्याउन हाम्रो schoolmaster थियो। "
गलाती 3: 23-24 SFB98
यो अब्राहाम र आफ्नो सन्तानलाई संसारको हकदार गर्न प्रतिज्ञा पाएको, तर विश्वास द्वारा आउने धार्मिकता मार्फत व्यवस्था मार्फत थिएन। व्यवस्था पालन गर्नेहरूलाई राजकुमार हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि विश्वास सामग्री र शक्ति बाहिर राख्नु प्रतिज्ञालाई को खाली छ। व्यवस्था क्रोध उत्पादन गर्छ। तर त्यहाँ कुनै अपराधको छ, कुनै व्यवस्था छ। "
रोमी 4: 13-15 SFB98
पद 13, अब्राहाम विश्वास द्वारा जायज थियो त्यो परमेश्वरको विश्वास र धार्मिक थियो, पनि अब्राहामको समयमा प्रशंसक को व्यवस्था।
"तर व्यवस्था पनि मामला मा आए धेरै ठूलो थियो। तर पाप वृद्धि जहाँ, अनुग्रह अझ abounded "
रोमी 5:20 SFB98
तर हामी व्यवस्था राम्रो ती लागि एक प्रयोगहरू यसलाई राम्ररी र महसुस यो धार्मिक लागि तर कानूनको पालन नगर्ने र विद्रोही लागि, अभक्त र पापीहरूको, अपवित्र र अपवित्र लागि, हत्याराहरूलाई लागि आफ्नो बाबु र आमा, दुर्व्यवहार गर्नेहरूका लागि हो भनेर भने छ, थाहा अभ्यास दास व्यापारीहरु, फटाहा, perjurers लागि र सबै को लागि व्यभिचार र समलिङ्गीहरूले, कि resists ध्वनि सिद्धान्त - "
तिमोथी 1: 8-10 SFB98
व्यवस्था राम्रो छ तर प्रश्न कहिल्यै, तपाईं जो व्यवस्था राख्छ, अर्को शब्दमा सबै 613 टोली, अर्थात् वासस्थानमा गर्न व्यवस्थापन गर्न छ पाप? वा उदाहरणका लागि, यदि तपाईं विश्राम दिन वा दशौं राख्न र सुँगुर मासु र आदि खान छैन व्यवस्था भनेअनुसार
तपाईंले ती 613 को एक उल्लङ्घन यदि, तपाईं सम्पूर्ण व्यवस्था भङ्ग गरेका छन्? त्यसपछि परमेश्वरको सामु धर्मी छैन गणना, त्यसपछि तपाईं भएकाहरूलाई एक हो
आउट ल र, विद्रोही दुष्ट र पापी मिमी,
"तर व्यवस्था नियालेर गर्न sticks गर्ने जो कोही पनि श्राप अन्तर्गत छन्। यो लेखिएको छ: "श्राप व्यवस्था पुस्तकमा लेखिएको छ कि सबै अपनाउँछन् गर्ने छैन र तिनीहरूलाई के एक छ '।"
गलाती 3:10 SFB98
"हामी मानिस व्यवस्था को कामहरू बिना विश्वास द्वारा जायज छ तर्क।"
रोमी 3:28 SFB98
"हाम्रो बुबा अब्राहाम काम जित्यो छ कि हामी के भन्न सक्छौं? अब्राहाम काम गरेर धार्मिक घोषणा भएको थियो भने उहाँले घमण्ड केही छ - तर परमेश्वरको सामु। के को लागि पद भन्नुहुन्छ? "अब्राहामले परमेश्वरको विश्वास, र यो धार्मिकताको उहाँलाई हिसाब थियो।" बिन्दु काम गर्ने एक अनुग्रहको छैन, आफ्नो तलब प्राप्त गर्न तर केही रूपमा उहाँले पनि जितेको छ। तर worketh बिना एक उहाँमा छैन विश्वास अभक्त, आफ्नो विश्वास धार्मिकता लागि गणना गरिन्छ घोषणा गर्ने। "
रोमी 4: 1-5 SFB98
तपाईं जो पनि उहाँले ख्रीष्टसित सँगै quickened छ, तपाईंको कसूर र आफ्नो खतना प्रकृतिका मृत थिए। उहाँले हामीलाई सबै अपराध क्षमा र आफ्नो मागहरू हामी विरुद्ध testified संग promissory टिप्पणीहरू बाहिर क्रस छ। उहाँले क्रूसमा यसलाई nailing द्वारा लगिएको छ। "
कलस्सी 2: 13-14 SFB98
येशूले व्यवस्था तपाईंले उद्धार, र उहाँले क्रूसमा आफ्नो पापको nailed र आफ्नै रगतले तिनीहरूको भुक्तानी,
ख्रीष्ट येशूको मा आत्मा को जीवन व्यवस्था लागि मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त गरेको छ। यो शरीरका मार्फत थियो कमजोर, कानून लागि असम्भव थियो, परमेश्वरले पाप बलिको रूपमा आफ्नै छोरा पठाएर गर्नुभयो, बाहिरबाट एक पापी मानिस जस्तै थियो जसले, र आफ्नो शरीर परमेश्वरको पाप निन्दा गर्नुभयो। "
रोमी 8: 2-3 SFB98
परमेश्वरको लागि त त्यो जसले उसलाई नष्ट मा पर्छ तर अनन्त जीवन छ भन्ने विश्वास गर्छ कि, मात्र पुत्र प्यारो आफ्नो दिनुभएको संसारमा प्रेम गर्नुभयो। "
यूहन्ना 3:16 SFB98
येशूले प्रेम उहाँले तपाईंलाई कार्य गर्न र विश्वास र अनुग्रह द्वारा सुरक्षित हुन छैन भनेर हुनुको मानव रूपमा अन्तर्गत व्यवस्था 100% बस्थे।
"किन चेलाहरूले जुवा जो न हाम्रो पुर्खाहरूले को घाँटी परमेश्वरको लोभ्याउन तिमीहरू के, र न त हामी भालु गर्न सके?"
प्रेरित 15:10 SFB98
कुनै शरीर व्यवस्था नियालेर आफ्नो दृष्टि मा जायज गरिनेछ। कानून द्वारा हामी पाप सजग हुन्छन्। "
रोमी 3:20 SFB98
व्यवस्था काम भने। विश्वास, हामी आवश्यक थियो।
विश्वासको "यसकारण", "यो अनुग्रह द्वारा हुन र आफ्ना सबै सन्तान लागि दृढ प्रतिज्ञा सक्छ, मात्र मान्छे हामीलाई सबै को पिता छ जसले अब्राहाम, विश्वास गर्नेहरूलाई लागि तर पनि व्यवस्था गर्न सम्बन्धित गर्नेहरूका लागि। "
रोमी 4:16 SFB98
"पाप तपाईं कानुन अन्तर्गत तर अनुग्रह अन्तर्गत छैनन् लागि, तपाईं माथि डोमिनियन छैन गर्नेछु।"
रोमी 6:14 SFB98
"त्यसैले पनि, भाइहरू, ख्रीष्टको शरीर द्वारा मृत व्यवस्था गर्न, तपाईं हामी परमेश्वरको निम्ति निस्कने फल ल्याउन पर्छ भनेर, मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो थियो उहाँलाई, अर्को हौं भनेर भएका छन्।"
रोमी 7:4SFB98
कृपया सम्पूर्ण रोमी7(महत्त्वपूर्ण) पढ्न
र यूहन्ना बप्तिस्मा दिने को दिन देखि अहिले सम्म हिंसा गर्न subjected स्वर्गको राज्य, र यो दमन हिंसाको मानिसहरू। सबै अगमवक्ताहरू र व्यवस्था को लागि, "जन सम्म भविष्यवाणी गरेका छन्
"व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले यूहन्ना सम्म आफ्नो समय थियो। त्यतिबेलादेखि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार, र प्रविष्ट गर्न सबैलाई आग्रह गरे छ। "
लूका 16:16 SFB98
त्यो भन्दा कुनै अन्य जग गर्न सक्छन् कुनै Lay लागि राखिएको छ, येशू ख्रीष्ट। "
कोरिन्थी 3:11 SFB98
यदि त्यो पहिलो करार faultless भएको थियो लागि, त्यहाँ दोस्रो लागि ठाउँ आवश्यक हुनेछ। "
हिब्रू 8:7SFB98
व्यवस्थाको करार त्यो पहिलो करार।
दोस्रो अर्थात् Beneficent संघ।
तपाईं र परमेश्वर हाम्रो पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टको देखि शान्ति ग्रेस। "
फिलिप्पी 1:2SFB98
Danielle गब्रिएल फेसबुक ।